Izinhlobo zesimo sezulu: izici nokuhlukaniswa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sazi, kuze kube manje sithole kuphela impilo emhlabeni wethu futhi kungenxa yendawo okukhona kuyo maqondana neLanga. Sikulokho ososayensi abakubiza ngokuthi "indawo yokuhlala". Ngenxa yalokhu umkhathi kakade ungqimba lwe-ozone Singaphila. Umhlaba athuthukiswe ahlukahlukene izinhlobo zezulu kuya ngobubanzi bamazinga okushisa esihamba kuwo. Ngokungafani namazinga okushisa esiwathola kulo lonke uhlelo lweSolar, iplanethi yethu ihamba ngezinga lokushisa eliphansi kakhulu.
Kulesi sihloko singafunda ngezinhlobo ezahlukene zesimo sezulu ezikhona emhlabeni wethu nokuthi yiziphi izici umuntu ngamunye anazo. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
1 Siyini isimo sezulu?
2 Izinhlobo zesimo sezulu ngokwalokho okukhona eMhlabeni
Siyini isimo sezulu?
Kuyinto evamile ukudida isimo sezulu nesimo sezulu. Ukwehlukaniswa kwale mibono kumele kuqondwe kahle ukuze kuqondakale kahle. Uma sibheka indoda yezulu bese isitshela ukuthi ezinsukwini ezimbili izokuna nokuthi kuzoba nokuvunguza komoya ka-50 km / h, ukhuluma ngesimo sezulu. Kulokhu, sihlaziya i- izimo ezisemkhathini ezizokwenzeka ngesikhathi nasendaweni ethile. Lokhu kuyingxenye yesimo sezulu lapho, ngenxa yobubanzi be- izinsimbi zezulu, ungazi ngezinga eliphakeme lokuthembeka okuzokwenzeka.
Ngakolunye uhlangothi sinesimo sezulu. Isimo sezulu singachazwa njengeqoqo lezimo eziguquguqukayo ezihlala zingaguquguquki ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuqinisekile ngalesi sisho ngeke uthole lutho. Sizokuchaza kangcono ngokujula. Ukuhluka kwesimo sezulu kuyi izinga lokushisa, izinga imvula (kungaba imvula noma nieve), imibuso yesiphepho, umoya, ingcindezi yasemkhathini, njll. Yebo, isethi yazo zonke lezi zinto eziguqukayo inamanani unyaka wonke wekhalenda. Baziwa ngokuthi izilawuli zezulu.
Zonke izindinganiso eziguquguqukayo zesimo sezulu ziyarekhodwa futhi zingahlaziywa njengoba zihlala zizungeze umkhawulo ofanayo futhi zihlaziywa ku climagram. Isibonelo, e-Andalusia awekho amazinga okushisa aqoshwe ngaphansi kuka -30 degrees. Lokhu kungenxa yokuthi lawa mazinga okushisa awahambisani nesimo sezulu saseMedithera. Lapho yonke idatha isiqoqiwe, izimo zezulu zihlukaniswe ngokwala magugu.
Isigxobo esisenyakatho sibonakala ngamazinga okushisa abandayo, imimoya enamandla, imvula ngesimo seqhwa, njll. Lezi zimpawu zibenza babizwe Isimo sezulu se-polar.
Izinhlobo zesimo sezulu ngokwalokho okukhona eMhlabeni
Isimo sezulu soMhlaba asikwazi ukuhlukaniswa kuphela ngokuya ngokuhlukahluka kwesimo sezulu okukhulunywe ngenhla, kepha futhi nezinye izinto ziyangenelela njenge ukuphakama nobude noma ibanga lendawo maqondana nolwandle. Kulesi sigaba esilandelayo sizobona cishe izinhlobo zezulu ezikhona nezimpawu zesimo ngasinye. Ngaphezu kwalokho, ohlotsheni ngalunye olukhulu lwesimo sezulu kunama-subtypes athile anemininingwane eminingi asebenzela izindawo ezincane.
Lezi zimo zibonakaliswa amazinga okushisa aphezulu. Isilinganiso samazinga okushisa minyaka yonke azungeze ama-degree angama-20 futhi akukho mehluko omkhulu kakhulu phakathi kwezinkathi. Ziyizindawo lapho izinkangala namahlathi kugcwele khona phezulu umswakama futhi, ezimweni eziningi, imvula eningi. Sithola ukuthi ama-subtypes:
Isimo sezulu se-Equatorial. Njengoba igama layo likhombisa, yisimo sezulu esedlula inkabazwe. Imvula ngokuvamile iba ningi unyaka wonke, kunomswakama omkhulu futhi kuhlale kushisa. Zitholakala endaweni yase-Amazon, enkabeni ye-Afrika, e-Insulindia, eMadagascar nasenhlonhlweni yaseYucatan.
Isimo sezulu esishisayo. Kuyafana nesimo sezulu sangaphambilini, kuphela ukuthi sinwebeka kulayini wezindawo ezishisayo zeCancer neCapricorn. Umehluko kuphela ukuthi lapha imvula iba ningi kuphela ezinyangeni zasehlobo. Ingatholakala eCaribbean, eVenezuela, eColombia, e-Ecuador, ePeru, kwezinye izingxenye zeNingizimu Melika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, ingxenye ye-Australia, iPolynesia neBolivia.
Isimo sezulu esishisayo. Lolu hlobo lwesimo sezulu lunezinhlobonhlobo zamazinga okushisa futhi imvula iyahlukahluka unyaka wonke. Ingabonakala eningizimu-ntshonalanga yeNyakatho Melika, eningizimu-ntshonalanga ye-Afrika, ezingxenyeni zeNingizimu Melika, enkabeni ye-Australia naseMpumalanga Ephakathi.
Ugwadule nehlane eliwugwadule. Lesi simo sezulu sibonakala ngokuba namazinga okushisa aphezulu unyaka wonke anezinga lokushisa eliphakeme kakhulu eliphakathi kwemini nobusuku. Awukho nhlobo umswakama, izimila nezilwane ziyindlala nemvula nayo iyindlala. Zitholakala enkabeni ye-Asia, eMongolia, entshonalanga emaphakathi neNyakatho Melika, naphakathi ne-Afrika.
Zibonakala ngokuba namazinga okushisa aphakathi nendawo angaba ngu-15 degrees. Kulezi zimo zezulu siyabona ukuthi izinkathi zonyaka zihlukaniswe kahle. Sithola izindawo zisatshalaliswa phakathi kwezindawo eziphakathi nendawo eziphakathi kwama-30 nama-70 degrees ukusuka kokufana. Sinezinhlokwana ezilandelayo.
Isimo sezulu saseMedithera. Phakathi kwezici zayo eziyinhloko sithola ihlobo elomile nelinelanga impela, kanti ubusika buyanetha. Singayithola eMedithera, eCalifornia, eningizimu yeNingizimu Afrika, eningizimu-ntshonalanga ye-Australia.
Isimo sezulu samaShayina. Lolu hlobo lwesimo sezulu luneziphepho ezishisayo kanti ubusika buyabanda kakhulu.
Isimo sezulu sase-Oceanic. Yiso esitholakala kuzo zonke izindawo ezisogwini. Ngokuvamile, kuhlale kunamafu amaningi nemvula, yize kungekho busika noma ihlobo elinamazinga okushisa adlulele. Kusogwini lwasePacific, eNew Zealand nakwezinye izingxenye zeChile neArgentina.
Isimo sezulu sezwekazi. Isimo sezulu sasendlini. Zitholakala ezindaweni ezingenalo ugu. Ngakho-ke, ziyashisa futhi zipholile phambilini kwazise alukho ulwandle olusebenza njengesilawuli esishisayo. Lolu hlobo lwesimo sezulu lutholakala ikakhulukazi enkabeni yeYurophu naseChina, e-United States, e-Alaska naseCanada.
Kulezi zimo zezulu, amazinga okushisa awavami ukudlula ku-10 degrees Celsius futhi kunemvula eningi ngendlela yeqhwa neqhwa.
Isimo sezulu sePolar. Isimo sezulu sezigxobo. Kubonakala ngokuba namazinga okushisa aphansi kakhulu unyaka wonke nokungabi bikho kwezimila njengoba umhlabathi uqandiswe unomphela.
Isimo sezulu sezintaba eziphakeme. Itholakala kuzo zonke izindawo eziphakeme zezintaba futhi ibonwa yimvula eningi namazinga okushisa ancipha ngokuphakama.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungazazi kangcono izinhlobo zezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Izinhlobo zezulu
UFlor Gonzàlez kusho
Kuhle kakhulu futhi kucacisiwe !! Kwangisiza kakhulu! Ngiyabonga!
Phendula uFlor Gonzàlez
UBella vk kusho
Ngiyabonga, kungisizile ngomsebenzi wami e-clasroom -w-
Phendula u-Bella vk